Dhamaan Dadka Muslimiinta Waxaan Leenahay Ciid Mubaarak. – Calamada.com
Dhamaan Dadka Muslimiinta Waxaan Leenahay Ciid Mubaarak.
calamada September 11, 2016 1 min read
Iyadoo maalinta Barito ay tahay maalinta kowaad ee Ciidul Adxaa oo ka mid ah ciidaha Allaah uu ku maneystay adoomadiisa Mulimiinta ah waxa uu webka Calamada Hambalyo ku aadan munaasabada ciida u dirayaa dhamaan dadka Muslimiinta oo ay ugu horeeyaan akhristayaasha iyo dhageystayaasha Webka Calamada.
Dhamaan dadka Muslimiinta waxaan leenahay Allaah hanaga wada aqbalo Acmaasha wanaagsan ee Allaah aynu kuwada caabudeyno sida Soonka maanta aan sooneen ee Yowmu Carafahâ€™ sidoo kale waxaan Allaah uga baryeeynaa inuu cibaadada Xajka ka aqbalo malaayiinta ruux Muslimiinta Xujeyda ah ee sanadkan gudanayo waajibaatka Xajka.
Markale webka Calamada waxa uu hambalyo ku aadan munaasabada ciidul Adxaa u dirayaa Mujaahidiinta iyo guud ahaan Muslimiinta Caalamka oo maalinta barito u dabaaldagayo maalinta kowaad ee munaasabada Ciidul Adxaa.
Halkan Ka Dhageyso Aadaabta Iyo Axkaamta Ciidul Adxaa.
.ØªÙ‚Ø¨Ù„ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ù…Ù†Ø§ ÙˆÙ…Ù†ÙƒÙ… ØµØ§Ù„Ø­ Ø§Ù„Ø£Ø¹Ù…Ø§Ù„
Previous: Ku Dhawaad Labo Milyan Xujeey Ah Oo Taagan Banka Carafo.
Next: Daawo Sawirada Ciidda Carrafo iyo Magaalada Jilib ee Wilaayada Jubbooyinka.